We.com.mm - ကိုးနှစ်ကျော်ကြာအောင် အမှားတစ်ခုမရှိပဲ ဘူတာရုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မျောက်ကလေး “ ဂျက် “
ဘူတာရုံမှာ ကိုးနှစ်ကျော်ကြာအောင် အမှားအယွင်းတစ်ခုမရှိပဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူ ဟာ လူမဟုတ်ပဲ မျောက်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အံ့သြကြမလား ?
ဘာဘွန်းမျောက်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဂျက် ဟာ ယူတန်ဟေ့ချ် ဘူတာရုံမှာ သခင်ဖြစ်သူ ဂျိမ်းစ်ဂျန်ပါ နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ် ဟာ သာမန်မီးရထားဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ။ တစ်ရက်မှာ ဂျိမ်းစ် ဟာ မီးရထားတွဲတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကိုခုန်ကူးတဲ့အချိန်မှာ ပြုတ်ကျပြီးရထားသံဘီးတွေအောက်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ကံကြီးလို့အသက်မသေခဲ့ပေမယ့် ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး ရထားကြိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျိမ်းစ် က ဘဝကိုအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ခြေတုတပ်ဆင်ပြီး လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေတုနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ကတော့သိပ်မတွင်လှပါဘူး။ တစ်ရက်မှာတော့ ဂျိမ်းစ် ဟာဈေးထဲမှာ ဘာဘွန်းမျောက်ကလေးတစ်ကောင်က လှည်းတစ်စီးကိုကူပြီးတွန်းပေးနေတာတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒီမျောက်ကလေးဟာ သူ့အတွက်အကူဖြစ်နိုင်တယ် လို့စဉ်းစားပြီး ပိုင်ရှင်ဆီကနေ ဂျက်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
မျောက်ကလေး ကိုတော့ ဂျက်လို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူတူတွဲလုပ်ဖို့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျက် ဟာ ရထားဆစ်ဂနယ်တွေနဲ့သံလမ်းတွေအဖွင့်အပိတ်လုပ်တတ်အောင် သင်ကြားခဲ့ပြီး ဂျိမ်းစ် ကိုလျင်လျင်မြန်မြန်ပဲကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ ဂျိမ်းစ် ဟာ ဂျက်ကို လက်တစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်းစတာတွေနဲ့ ရထားဆစ်ဂနယ်တွေကိုခွဲခြားနိုင်အောင်သင်ပေးခဲ့ပြီး၊ ဘယ်ဆစ်ဂနယ်ဆိုရင် ဘယ်လီဗာကိုဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုပါ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ရထားတစ်စီးဘူတာရုံကထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဥသြသံလေးချက်ကြားရပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဂျိမ်းစ် ကလိုအပ်တဲ့သော့တွေယူပြီး ရထားတာဝန်ရှိသူတွေကိုသွားပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်တွေမရှိတော့တဲ့ ဂျိမ်းစ် အတွက်တော်တော်လေးတော့ကသိကအောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဂျက်က ဒီတာဝန်ကိုလွှဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်း ဂျိမ်းစ် နဲ့ ဂျက်တို့ဆရာတပည့်ဟာ လူသိများလာပြီး ရထားတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကတောင်လာကြည့်ရတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက မျောက်တစ်ကောင်လက်ထဲ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေထည့်ရသလားဆိုပြီး ဂျိမ်းစ် နဲ့ ဂျက်ကို အလုပ်ဖြုတ်ဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျက် ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမြင်အပြီးမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပဲ ဘူတာရုံမှာဆက်ပြီးခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်ဟာ နောက်ဆုံးဘူတာရုံရဲ့ တရားဝင်အလုပ်သမားဖြစ်လာပြီး တစ်ရက်ကို ဆင့် ၂၀ နဲ့ တစ်ပါတ်ကို ဘီယာဗူးတစ်ဝက်ရပါတယ်။ ဂျက်ဟာ ကိုးနှစ်ကြာအောင် ယူတန်ဟေ့ချ်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အမှားအယွင်းတစ်ခုတောင်မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ကိုးနှစ်ကြာအပြီးမှာတော့ ဂျက်တစ်ယောက် တီဘီရောဂါ နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျက် ရဲ့ တာဝန်ကျေပြွန်မှု နဲ့ စွမ်းရည်တွေကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ကိတ်တောင်းမြို့မှာ ဂျက်ရဲ့ဦးခေါင်းခွံကိုထားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ကြောင်ဘုရားကျောင်းနဲ့ ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကြောင်လေး Koyuki
ဖုန်းမရှိလို့ COVID-19 app မပြနိုင်တာကြောင့် ကားစီးခွင့်မရဘဲ မိုင် ၆၀၀ နီးပါး လမ်းလျှောက်ခဲ့ရသူ
သင့်ရဲ့ ကိုယ်စားပြုရာသီခွင်ကို ဒီလိုပုံဆိုးပန်းဆိုးကြီးတွေဖြစ်စေချင်ပါ့မလား ?
နဂါးလေး Mushu တင်မက သီချင်းလည်းလုံးဝမပါတဲ့ Mulan ရဲ့ live-action
ခက်ခဲတဲ့ ငယ်ဘဝအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင် (5) ဦး